ကြာပွတ်များအတွက် Whisk မီးဖိုချောင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်များအတွက်ရိုးရှင်းသောနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု confectionery ၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့, နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပါဝင်ပစ္စည်းများရောမွှေဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ သိသိသာသာသင်၏အလုပ်ကိုရိုးရှင်းပြီးရောနှောသို့မဟုတ် Blender သုံးစွဲဖို့အခွင့်အလမ်းရှိနေသော်လည်းအမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုယ်တိုင်အမှုအရာလုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့။
ကြာပွတ်များအတွက် beaters အမျိုးအစားများ
နွေဦး။ Beater နွေဦးနှင့်တစ်ဦးဇွန်းအလွတ်အတွင်း၌အာကာသများနှင့်ဒဏ်ရာနွေဦး၏ပုံန်းကျင်နှင့်အတူြိမ်များအတွက်ပုံရှိပါတယ်။
စွန်းတိုင်အောင်အပေါ်ဘောလုံးနှင့်အတူ Panicles ။ ဤပုံစံကိုသင်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသို့မဟုတ်နံရံပေါ်မှာဘာမှထွက်ခွာနှင့်ပန်းကန်၏အောက်ဆုံးရိုက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါပုတီးကိုကျေးဇူးတင်အလင်းနှင့် airy ရရှိသောအရာ, ဝက်အူချောင်းနဲ့လိမ်းဆေး, များအတွက်သင့်လျော်သော။
တစ်ခုတည်းယန္တရားရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်လက်ကိုင်ပေါ်မှာဖိအားမှာလှည့်ထားတဲ့ Petaling မျက်ရည်စက်လေးတွေ။ အဲဒီ device ကိုတစ်ဦး Mini-ရောနှောအဖြစ်ပြုမူအချို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
ပေါင်းလိုက်သော။ မကြာခဏပုံမှန်အစေးလိမ်တပ်ဆင်ထားသို့မဟုတ်ဘောလုံးကိုနှင့်အတူအခြားအလားတူဆွန်းနယ်ပယ်အတွင်းမှတင်လိုက်တယ်။ လမ်းလိမ်ပွင့်ချပ်များကအထူးအစီအစဉ်ဖြင့်ခွဲခြား Professional ကဆက်စပ်ပစ္စည်း။ သူတို့တစ်တွေသိပ်သည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှိုးဆော်နှင့်အတူခြိုးဖကျြဆီးတားနှင့်မလုံလောက်သောအထူနှင့်ခိုင်ခံ့သောတံဖျာဖြစ်ကြသည်။
, ထိုကိရိယာ၏ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ပစ္စည်းမှပိုကောင်းလစာအာရုံကိုြိမ်များအတွက် whisk စိတ်ဝင်စားသူများသည်။ အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဆုံးစွန်သောမကြာခဏနောက်ထပ်နိုင်လွန်သို့မဟုတ်ဆီလီကွန်နှင့်အတူအင်္ကျီဖြစ်ပါသည်, ပလတ်စတစ်နှင့်သံမဏိဖြစ်နိုင်သည်။ ပလပ်စတစ်၏အားသာချက် - ကောင်းသောစျေးနှုန်း, ဒါပေမယ့်လက်တွေ့ကျပြီးကြာရှည်ခံမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းတွေအများကြီးပိုလေးနှင့် " သာ. " ဖြစ်ကြောင်းသော်လည်းသံမဏိပစ္စည်းများ, ကြာကြာကြာရှည်။ ဒါဟာအစပန်းကန်မျက်နှာပြင်ကိုလုယူနိုငျသညျ, စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းဆူညံသံထုတ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ကြသည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဦးကိုအားနည်းချက်များကိုနှင့်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ကချွတ် rip နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ကြပေမယ့်, ဆီလီကွန်မှုန်ရေမွှားသို့မဟုတ်နိုင်လွန်နှင့်အတူရုန်းကန်နေ။
ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်အတူတက် လာ. , သူတို့ဟင်းလျာများ, အသုံးပြုမှုဖန်သို့မဟုတ်ကြွေကွန်တိန်နာလုယူမသည်အထိကြက်ဥြိမ်များအတွက်သမားရိုးကျသံမဏိ beaters ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘာမျှမ။ ပစ္စည်းလည်းကွဲပြားခြားနားပေမယ့်အရေးပါမဟုတ်နိုင်ပါတယ်ကိုင်တွယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒါဟာ crack နဲ့ crack အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကြွင်းသောအရာတည်ရှိဖို့အတော်လေးမှန်နိုငျသောကွောငျ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျကိုသာသစ်ပင်ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
အပြင်နို့တုန်လှုပ် frothing အတှကျအသုံးပွုသောရပ်နေလျှပ်စစ်ပစ္စည်းြိမ်များအတွက်လက် beaters မှ။ သူ့ကိုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, နို့မြှုပ်မယ့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းပြင်ဆင်နိုင်ပြီး, သေးသူ Battery ကို၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ခံရပ်သွားသည်နှင့်ကြက်ဥြိမ်။ ဒါဟာဘက်ထရီသို့မဟုတ်အဓိကစွမ်းအားဖြင့်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအများဆုံးမကြာခဏသံမဏိနှင့်ရော်ဘာပလပ်စတစ်၏ကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ သူတို့ဟာအသုံးပြုမှုကိုအပြီးသုံးပါနဲ့ဆေးကြောဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
တိုင်းအိမ်ရှင်မများ၏လက်နက်တိုက်အတွက်ြိမ်များအတွက် beaters အလွန်က၎င်း၏အလုပ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ - ဤတွင်သူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏အကူအညီဖြင့်, သင်ငံပြာရည်စေနိုင်သည်, မုန့်စိမ်းကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော texture နှင့်ဖွဲ့စည်းမှု, ဟင်းချိုဖြစ်ပါသည် meringue နှင့်အခြားဟင်းလျာများ။ သင်ဤမီးဖိုချောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း select လုပ်သောအခါသင်သည်၎င်း၏ parameters တွေကိုအားလုံးကိုအာရုံစိုက်သင့်လက်၌ကိုင်ထားအလေးချိန်နှင့်ဆုတ်ထားတာလွယ်ကူအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တိုက်ခန်းထဲမှာလေထုငယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - အရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာနည်းလမ်းများ
လျှပ်စစ်သို့မဟုတ် induction hob ဓာတ်ငွေ့တစ်အိုးရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါအစပြုသူတစ်ဦးဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - ရိုးရှင်းသောအကြံပြုချက်များ
အဆိုပါ humidifier နှင့်လေထုသန့်ရှင်းစေသော
အဘယ်အရာကို Yorkshire Terriers Feed မှ - ညာဘက်အစားအသောက်များတွင်သေချာစေရန်မည်ကဲ့သို့?
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူမာစတာအတန်းအစား - ပန်းသီး foamirana ၏ပန်းပွင့်
ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ချင်ပေမယ့် willpower ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး - ဘာလုပ်ရမှန်း?
ဆောငျးရာသီဘွတ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
Mila Kuni မှာ Ashton Kutcher ကဒုတိယအကြိမ်မိဘများဖြစ်လာခဲ့သည်